Hain-trano goavana teny Itaosy - Madagascar Informations
8 novembre 2016 11 novembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Nisehoana hain-trano goavana tokony ho taminy taminy 12 ora ora alina omaly teny amin’ny fokontany Betavoahangy Commune Itaosy.
Fivarotan-kazo lehibe iray no nirehitra ary kila tsy nisy azo noraisina intsony ny entana sy ny machine rehetra nampiasaina tao.
Fipoahana niainga avy tao aminy tranon’ireo mpiambina 2 lahy no nihaviany afo, saingy tsy mbola nahataitra ny mponina manodidina izany tamin’ny voalohany saingy noho ny afaka ny fotoana fohy dia nidedaka ny afo ary tsy voafehy intsony .
Tonga avy hatrany ny mpitandro filaminana sy ny jirama rehefa nantsoiny mponina ary nanomboka ny famonoana ny afo taminy alalany siny.
Tsy tonga kosa ny mpamonjy voina raha tsy taminy 3 ora maraina kanefa efa taminy 12 ora alina no nantsoina.
Nilaza izy ireo fa mila mameno taratasy sy mila solika 15 l vao afaka miainga. Rehefa tonga ihany koa anefa izy ireo dia mbola fiara tsy misy rano no nentin’izy ireo, soa fa tsy nisy ny aina nafoy. Omena an’iza ary ny tsiny, tena mandray ny andraikiny ara-potoana tokoa ve ny mpamonjy voina eto amintsika sa rehefa misy aina afoy vao ho taitra Soa anefa fa tsy nisy izany.
← Le Président de la République à Vohipeno
ZUMBA MARATHON : LE PLUS GRAND ÉVÈNEMENT DE DANSE FITNESS À MADAGASCAR →
Tourisme à Nosy Be
26 avril 2015 Madagascar Informations 0